Vaovao - Fa maninona ny alika sasany no ambony noho ny hafa?
Fa maninona ny alika sasany no ambony noho ny hafa?
Mahita alika manodidina izahay ary ny sasany amin'izy ireo dia toa manana angovo tsy manam-petra, ny sasany kosa milamina kokoa. Betsaka ny ray aman-dreny miompy no miantso haingana ny alikany be herim-po ho “mahery fihetsika”, Nahoana ny alika sasany no mahery noho ny hafa?
Mpiandry Alemanina, Collies Border, Retrievers volamena, Huskies Siberia, Terriers - inona no itovizan'ireo karazana alika ireo? Nihalehibe noho ny asa sarotra izy ireo. Izy ireo dia mazàna ho feisty sy hyper.
Taona alika kely alika
Ny alika tanora kokoa dia manana tanjaka bebe kokoa ary ny zokiny afaka mihalefaka amin'ny fahanterany, fa ny alika sasany kosa mijanona ho mavitrika mandritra ny androm-piainany manontolo, miankina amin'ny fahasalamany izany. Nandritra ireo taona niforonany ireo, ny fiarahamonina, ny fiofanana sahaza ary ny fanamafisana tsara dia lakilen'ny fahasambarana alika angovo avo lenta amin'ny taona faramparany.
Ny sakafo mora vidy dia mazàna entina amina fangaro izay tsy ilain'ny alikao, toy ny mpameno, ny vokatra vita amin'ny vokatra, ny fandokoana ary ny siramamy. Ny famahanana ny alikanao sakafo ambany kalitao dia mety hisy fiatraikany amin'ny fitondran-tenany, toy ny fihinanana sakafo junk mety hanova ny toetrantsika. Ny fandinihana dia misy ifandraisany amin'ny hyperactivity sy ny sakafo alika sasany, noho izany dia misy dikany ny mamahana ny alika sakafo matanjaka amin'ny kaly.
Ny alika mavitrika dia mila fampihetseham-batana ary miaraka iray miaraka aminao ho sakaizany ankafizinao. Azonao atao ny milalao lalao miaraka amin'izy ireo. Ento koa ny fatoran'ny alika, ny fitsangatsanganana any amin'ny zaridainan'alika dia hampandehanan'izy ireo, hifanerasera, ary ho reraka amin'ny tsia. fotoana.